SEOmoz dia mamoaka ny renin'ny SEO rehetra Apps. Martech Zone
Nanafaka ny renin'ny Apps SEO rehetra ny SEOmoz
Alakamisy, Aogositra 12, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tena mpankafy an'i Rand Fishkin aho ary SEOmoz. Matetika aho no maheno mimonomonona ao amin'ny indostrian'ny Search Engine Optimization momba ny SEOmoz hoe marina na diso… saingy mbola tsy nahita fikambanana tokana manangona loharanom-pahalalana, matihanina, fitaovana ary fitsapana maro momba ny SEO aho.
Rand, ny tenany, dia antony iray hafa tiako ny SEOmoz. Vao tsy ela akory izay, rehefa nahitako fironana hafahafa niaraka tamin'ny iray amin'ireo tranokalan'ny mpanjifako nanerana ny pejin'izy ireo (tapitrisa), nandany fotoana i Rand rehefa avy niasa mba hanome powwow miaraka aminay. Nihaino tamim-paharetana izy, nanabe ary nanampy anay hamorona drafitra fitsapana. Nanamafy ny ahiahinay koa izy. Zalahy tsy tia tena! Mpikambana PRO fotsiny aho ary tsy nisalasala nanampy mihitsy.
SEOmoz beta izao dia manandrana ny fampiharana Web Search Organic amin'ny fanarahana ny ezaka fanatsarana ny motera fikarohana nataonao. Taloha, ny bandy SEO toa ahy dia nampiasa fitambarana Fitaovana SEOmoz, Webmasters, Analytics, Laboratoara manam-pahefana, SEO lehibe, ary Semrush manara-maso karazana miovaova:
Laharana mifaninana - fandinihana ireo mpifaninana biolojika.
Filaharana Keyword - mijery ny filaharan'ny teny lakile sy ny fandrosoantsika
CTR sy Fiovam-po - fanaraha-maso ny tahan'ny click-through amin'ny pejinay sy ny fanovana ny mpitsidika ho mpanjifa.
backlinks - fanaraha-maso hoe iza no mampifandray anay sy ny tanjak'ireo tranonkala ireo.
Fitsapana mandady - Ny famakafakana ny pejy sy ny fananganana tranokala hahazoana antoka fa havaozina ho an'ny motera fikarohana ny atiny.
SEOmoz manohy mihoatra ny zavatra antenaiko amin'ny maha loharanom-panabeazana ahy. Ny horonan-tsary fampiofanana efa nandroso, ny fitaovana ary ny hatsarany amin'ny maha-mpanome tolotra serivisy azy ireo dia manatsara hatrany. Misoratra anarana amin'ny SEOmoz mandritra ny herintaona ary manatrika hetsika SEOmoz tokana dia afaka mandoa dividends ho an'ny orinasanao. Raha maso ivoho mikasa hanitatra ny tolotra famolavolana ho karoka, SEOmoz dia ilaina.
Miarahaba an'i Rand sy ny fikambanany amin'ity fanampin-javatra mahafinaritra ity. Manantena ny hahita ireo fiasa nitarina aho amin'ny taona manaraka. Ary efa manara-maso ny fanentanana nataoko voalohany tao aho! Raha te-hahita izany ianao amin'ny asany, SEOmoz dia manana Webinars maromaro voalahatra amin'ny fampiharana PRO, register now.
Tags: fikarohana biolojikaseo organikafikarohana OptimizationSEOseo moztoolsseomoz
Google mamoaka horonan-tsary tohana amin'ny valin'ny fikarohana
Manamavo ny media sosialy ianao
Apr 17, 2012 ao amin'ny 1: PM PM
mahafinaritra, nefa lafo toy ny helo…